CITY FORM DESIGN မှခေတ်မီပန်းခြံ၊ မြို့နှင့်ဥယျာဉ်ခုံတန်းရှည်များ
ပန်းခြံခုံတန်းရှည် ၎င်းတို့သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည် သေးငယ်တဲ့မြို့ပြဗိသုကာ။ အသုံး ၀ င်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းတို့သည်ထိုင်ခုံအတွက်သုံးသော်လည်းနေရာထိုင်ခင်းပြင်ဆင်ခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်သူတို့သည်မြို့ပြပရိဘောဂများဖြစ်သည်။ ပန်းခြံများ၊ ရင်ပြင်များ၊ ဥယျာဉ်များ၊ လမ်းများနှင့်မြို့တွင်းမှတ်တိုင်များကိုခုံတန်းရှည်များတပ်ဆင်ထားသည်။
ကျယ်ပြန့်သောအဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်ခုံတန်းရှည်များသည်ပန်းခြံများနှင့်ဥယျာဉ်များတွင်သာမကသေးငယ်သောဗိသုကာပညာ၏အသုံးအများဆုံးသောဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ ခုံတန်းရှည်များကိုအားကစားရုံများ၊ ပွဲကြည့်စင်မတိုင်မီ၊ ကျောင်းပြပွဲများ၊ ချာ့ချ်များ၊ သုiesာန်များနှင့်အခြားနေရာများစွာတွင်လည်းရှာနိုင်သည်။
စီးတီးခုံတန်းရှည်များကရှည်လျားသောလမ်းလျှောက်မှုကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသောခြေထောက်များအတွက်အိုအေစစ်တစ်ခုသာမကအချစ်ဝန်ခံခြင်းအတွက်အခါအားလျော်စွာခဏရပ်ရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ ကဗျာဆန်ဆန်နည်းနည်းပြောရလျှင်မြို့ပြခုံတန်းလျားများသည်အရေးအပါဆုံးဥယျာဉ်နှင့်ပန်းခြံပရိဘောဂများဖြစ်သည်။ ၎င်းပြင်ကစားကွင်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်၊ မြို့တွင်းဥယျာဉ်၏အတွင်းပိုင်း၊ အိမ်နောက်ဖေးကန်သို့မဟုတ်အခြားအများပိုင်နေရာများကိုစိတ်ကူး။ မရနိုင်ပါ။
ပန်းခြံရှိခုံတန်းရှည်များကိုပန်းဥယျာဉ်၌နေရောင်ခြည်၌ထိုင်။ ပန်းခြံအတွင်းရှိသူငယ်ချင်းတစ် ဦး နှင့်စကားပြောခြင်း၊ ရေကန်နားကစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကစားကွင်း၏ဆွဲဆောင်မှုများကိုပျော်ရွှင်စွာကလေးကြည့်နေသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပန်းခြံခုံတန်းရှည်ကိုအသုံးပြုသည်။ ပန်းခြံခုံတန်းလျားများအတွက်မဟုတ်လျှင်မြို့ပြနေရာသည် ပိုမို၍ ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီးလည်ပတ်နိုင်မှုလည်းနည်းလိမ့်မည်။
မြို့ရဲ့ခုံတန်းရှည်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ၎င်းတို့အမျိုးအစားများကို ဦး တည်ရာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများအပြင်စတိုင်နှင့်ဒီဇိုင်းတို့ကြောင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။
အစီအစဉ်သို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွဲခြားနိုင်သည် လမ်းခုံတန်းရှည်အများဆုံးမြို့ပြခုံတန်းရှည်ကိုခေါ်, ပန်းခြံခုံတန်းရှည် နှင့် ဥယျာဉ်ခုံတန်းရှည်.
ဆောက်လုပ်ရေးကြောင့်တည်ဆောက်ပုံကြောင့်ထူးခြားသည် backrest မပါဘဲခုံတန်းရှည် သို့မဟုတ် backrest နှင့်အတူခုံတန်းရှည်။ ခြေထောက်လေးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောခုံတန်းရှည်များနှင့်မြေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးနှင့်အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ထားသည့်ခုံတန်းရှည်များ။
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြီးသောပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့်ပန်းခြံခုံတန်းရှည်များကိုခွဲခြားထားသည် သံခုံတန်းရှည်ကိုသွန်းသည်, သံမဏိခုံတန်းရှည် - သံမဏိဘားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခုံတန်းရှည်များ, ကွန်ကရစ်ခုံတန်းရှည်, ခိုင်ခံ့သောကွန်ကရစ် prefabricated ဒြပ်စင်များနှင့်လုပ်ခုံ ကျောက်ခုံများ သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်ခုံတန်းရှည်.
ဒီဇိုင်းနှင့်ဒီဇိုင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပန်းခြံခုံတန်းရှည်အမျိုးမျိုးကိုခွဲခြားနိုင်သည်။ အရိုးရှင်းဆုံးပြိုကွဲခြင်းပါဝင်သည် ခေတ်သစ်ခုံတန်းရှည် နှင့်ခေတ်သစ်ခုံတန်းရှည်, အများဆုံးမကြာခဏပေးထားသောခေတ်၏စတိုင်အပေါ်လုပ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ပတျဝနျးကငျြအဆောက်အ ဦး များနှင့်အခြားဒြပ်စင်အဆင်ပြေအောင် သေးငယ်တဲ့မြို့ပြဗိသုကာ.
ပန်းခြံခုံတန်းလျားတစ်ခုရွေးချယ်တဲ့အခါဘာကိုစဉ်းစားရမလဲ။ စံသတ်မှတ်ချက်များစွာရှိသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ၎င်းတို့ထဲမှအရေးကြီးဆုံးများကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။
မည်သည့် ၀ ယ်ယူမှုနှင့်မဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဲ့သို့ပင်ကုန်ပစ္စည်း၏စျေးနှုန်းသည်အမြဲတမ်းရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ပန်းခြံခုံတန်းလျား၏စျေးနှုန်းသည်ခုံတန်းရှည်၏ပစ္စည်းနှင့်၎င်း၏ရှုထောင့်အပေါ်များစွာမူတည်သည်။ စျေးပေါသောပန်းခြံခုံတန်းရှည်များသည်သံမဏိခုံတန်းလျားများဖြစ်သည်။ အသေးငယ်ဆုံးသူများကစျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် ခုံတန်းရှည်ကြီးလေလေထုတ်လုပ်ရန်ပစ္စည်းများပိုမိုအသုံးပြုလေလေ၊ စျေးလည်းတက်လေလေဖြစ်သည်။
ထို့ထက်ကား၊ ခုံတန်းရှည်သည်လူကြီးများနှင့်ကလေးများအတွက်လုံခြုံမှုရှိရမည်။ ဤလမ်းပေါ်ရှိပရိဘောဂများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူလုံခြုံမှုလျော့နည်းခြင်းမရှိစေရန်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတာရှည်ခံရမည်။
ပန်းခြံခုံတန်းရှည်များနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့်တရားဝင်ပိုလန်စံသတ်မှတ်ချက်မရှိသော်လည်းပန်းခြံခုံတန်းရှည်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲတည်ဆောက်ရာတွင်အလားတူလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ ကစားကွင်းပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် PN-EN 1176 စံကိုအများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
အများပြည်သူနေရာများတွင်ကျန်ရှိနေသည့်ပရိဘောဂများသည်ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပန်းခြံခုံတန်းရှည်များတွင်ခိုးယူဖျက်ဆီးခြင်းစနစ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ခုံတန်းရှည်ကိုရွေ့လျားခြင်း၊ ခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အိုးအိမ်မဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုမဆိုကာကွယ်ရန်အတွက်မြေသို့တူးထားသောခုံတန်းရှည်တစ်ခုဖြစ်သည်။
များသောအားဖြင့်ပန်းခြံခုံတန်းလျားများ ခွဲ၍ မရသောအရာသည်အမှိုက်သရိုက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို၎င်း၏ဒြပ်စင်အဖြစ်ခုံတန်းလျားနှင့်ပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ ဒါဟာသေးငယ်တဲ့ဗိသုကာ၏သီးခြားဒြပ်စင်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ထို့နောက်သူကဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားနှင့်ခုံတန်းလျားဒီဇိုင်းနှင့်အမြင်အာရုံကိုက်ညီရပါမည်။
ပန်းခြံခုံတန်းရှည်များတွင်စားပွဲများ၊ တပ်ရင်းများနှင့်အခြားအရာများစွာရှိသည်။ သူတို့ကခရီးဆောင်အိတ်တွေ၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ သူတို့ကသင့်အားစာအုပ်ကိုအဆင်ပြေစွာအနားယူရန်၊ ပစ္စည်းအချို့ကိုနေရာချရန် (သို့) စားသောက်ဆိုင်ရှိအခြေအနေများနှင့်အတူစားသောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ပန်းခြံများ၌ခုံတန်းရှည်များကိုတစ်ခါတစ်ရံစားပွဲများနှင့်အတူလိုက်ပါလေ့ရှိပြီးစားပွဲဝိုင်းတွင်စစ်တုရင်၊ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များနှင့်အခြားဂိမ်းများကစားနိုင်သည်။ အဆိုပါခုံတန်းရှည်ဆီမီးခွက်၏ပုံစံအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံအလင်းရောင်ရှိနိုင်ပါသည်။ ပန်းချီကားသို့မဟုတ်ပန်းနုရောင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီနေ့ဒီဇိုင်နာကသာစိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုကန့်သတ်ထားသည်။
ကာဗွန်နှင့်သံသတ္တုစပ်ကိုသံဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်မြို့၏ခုံတန်းရှည်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောအရှည်ကြာဆုံးဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ သံသတ္တုထည်များမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်ပုံစံမျိုးစုံရှိနိုင်သည်။ သူတို့ကဖန်စီအလှဆင်မှုများနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောခြေထောက်တပ်ဆင်မှုရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောခုံတန်းရှည်များသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်သူတို့၏အသွင်အပြင်ကိုလွတ်လပ်စွာပုံဖော်နိုင်သည်။ သံခုံတန်းရှည်တစ်လုံးသည်ဥယျာဉ်၊ ဥယျာဉ်နှင့်စတုရန်းများတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်မြို့ပြပရိဘောဂအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
သွန်းသောသံပန်းခြံခုံတန်းရှည်များ၏နောက်ထပ်အားသာချက်မှာသူတို့၏အလေးချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပန်းခြံခုံတန်းရှည်များသည်အလွန်လေးလံသဖြင့်မြေပေါ်တွင်ကျောက်ချရပ်နားရန်မလိုဘဲအလွန်တည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျောပိုးအိတ်ပေါ်တွင်ခုန်နေသောကလေးများသည်ထိုကဲ့သို့သောလေးလံသောတည်ဆောက်ပုံကိုအလွယ်တကူမှောက်လှန်နိုင်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့ဖျက်ဆီးမှုများပင်လျှင်မကောင်းသောအပြုအမူများကိုပြုလုပ်ရန်ငြင်းဆန်လိမ့်မည်။
သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခုံတန်းရှည်များသည်အလွန်စွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသည်။ ဤသည်သဘာဝကဆောက်လုပ်ရေးပိတ်ပင်တားဆီးမှုသူတို့ကိုဇာတ်ကောင်များနှင့် nobility ပေးသည်။ သစ်သားတွင်ကဲ့သို့ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကိုပုံမှန်ဆေးသုတ်ခြင်း၊ အသစ်ပြုပြင်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ရာသီဥတုဆိုးရွားခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဂရုစိုက်ပါ။
သစ်သားပန်းခြံခုံတန်းရှည်များကိုမြေ၊ သဲနှင့်မြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင်မထားသင့်ပါ။ ၎င်းတို့သည်အမြဲတမ်းသို့မဟုတ်ပုံမှန်စိုစွတ်သောမြေများနှင့်အဆက်အသွယ်မလုပ်သင့်ပါ။ ၄ င်းတို့သည်အမိုးများသည့်နေရာများနှင့်ခိုင်မာသော၊ ညှစ်ထားသောမျက်နှာပြင်ရှိသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ခေတ်မီမြို့တော်ခုံတန်းရှည်များလား ဒါမှမဟုတ်ဥယျာဉ်တစ်ခုအတွက်ခုံတန်းရှည်တစ်ခုလား။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလား သတ္တုခုံတန်းရှည်များကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသောသတ္တုစပ်များကိုသူတို့၏ဘောင်များတွင်အသုံးပြုသည်၊ ကြာရှည်ခံသည်၊ ဤဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအမျိုးအစား၏ဥပမာမှာလူမီနီယမ်ဖြစ်သည်။
သတ္တုခုံတန်းရှည်များတွင်ခေတ်မီဒီဇိုင်းရှိသည်။ သူတို့ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့အလေးချိန်နိမ့်ခြင်းပဲ။ ထိုကဲ့သို့သောခုံတန်းရှည်များကတစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ပြောင်းရွှေ့ရန် ပို၍ အဆင်ပြေပါသည်။ သူတို့ကဥပမာအားဖြင့်ပြင်ပစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ရှုသူများအတွက်ထိုင်ခုံတစ်ခုသို့မဟုတ်ပရိဘောဂပရိဘောဂအပိုင်းအစများအဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ရာသီပေါ်မူတည်။
ပန်းခြံတစ်ခုသို့မဟုတ်မြို့တော်ခုံတန်းရှည်တွင်ပျဉ်ပြားများ၊ ရိုးရာကျောရိုးများနှင့်ခြေထောက်များမရှိပါ။ ၎င်းသည်ကွန်ကရစ်သွန်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကျောက်ဖြင့်ထွင်းထားသည်။ ဤခုံတန်းရှည်များသည်လေးလံသည်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်လှေကားများ၊ စမ်းရေတွင်းသို့မဟုတ်ပန်းပွင့်များဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ကသေးငယ်တဲ့ဗိသုကာ၏အခြားဒြပ်စင်နှင့်အတူperfectlyုံ၌ရောနှောနေခြင်း။
လူကြိုက်များသောဖြေရှင်းချက်များတွင် element များစွာပေါင်းစပ်ခြင်းလည်းပါဝင်သည်။ သစ်သားခါးနားနှင့်ထိုင်ခုံပါသောခုံတန်းရှည်တစ်ခုသည်ကြီးမားသောကွန်ကရစ်ခြေထောက်များရှိနိုင်သည်။ အားလုံးသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ဒီဇိုင်းဖန်တီးသူ၏စိတ်ကူးပေါ်မူတည်သည်။
4.9 /5( 31 မဲ )